TAITỌS 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (TAI 2)
Ma gị onwe gị Taịtọs, ahapụkwala ịkụzi eziokwu ahụ ya na ịbụ onye Kraịst so.
Ọ bụ ha kwesịrị ịzụpụta ụmụ agbọghọ ka ha nwee uche zuru oke, bụrụ ndị na-ahụ di ha na ụmụ ha nꞌanya.
Nꞌotu ụzọ ahụ kwa, gwakwa ụmụ okorọbịa ka ha nwee akọnuche zuru oke.
Nꞌebe a ka gị onwe gị ga-abụrụ ha ihe ịma atụ na ihe ilere anya nꞌịrụ ọrụ ọma. Mee ka ihe nile ị na-eme gosi na ị hụrụ eziokwu ahụ nꞌanya, na ị bụkwa onye na-adịghị eji ya egwuri egwu.
Hụ na mkparịta ụka gị nile bụ site nꞌuche zuru oke, nke guzokwa ọtọ. Nke a ga-eme ka onye ọ bụla bịakwutere gị ka gị na ya rụrịtaa ụka laa nꞌihere, nꞌihi enweghị ihe ọ bụla o jidere aka ọ ga-eji kwujọọ gị.
Gwa ndị ohu ka ha na-erubere ndị nwe ha isi, ka ha na-eme ihe ga-atọ onyenwe ha ụtọ mgbe nile. Ka ha hapụ ịsa ndị nwe ha okwu.
Nꞌihi na Chineke na-enye onye ọ bụla chọrọ ịnara ya onyinye amara nzọpụta ebighị ebi ahụ nꞌefu.
Ndụ ile anya ọbịbịa ụbọchị ahụ a gọziri agọzi, mgbe a ga-eme ka ebube Chineke anyị na Onye nzọpụta anyị bụ Jisọs Kraịst pụta ìhè.
Kraịst bụ onye jiri onwe ya chụọ aja nꞌihi anyị, ịgbapụta anyị site nꞌajọ omume anyị nile. Ọ bụkwa ya sachara anyị, ime ka anyị bụrụ ndị nke aka ya, ndị dị ọcha, na ndị ọ na-agụ agụụ ime ihe dị mma mgbe nile.
Na-akụzi ihe ndị a. Werekwa ha na-adụ ndị gị ọdụ. Werekwa ha na-atụ ha mmehie ha nꞌihu. Ma ekwekwala ka ha lelịa gị anya.
TAITỌS 1 / TAI 1
TAITỌS 2 / TAI 2
TAITỌS 3 / TAI 3